Russia | January 2020
Ugu Weyn Ee Russia
Ruushka Ruushka ayaa xoojiyay oo dib u dhigay dhoofinta qamriga
Khubarada xaruntii falanqaynta "Sovekon" ayaa ku soo gabagabeeyay in Ruushku aanu fulin karin qorshaha dhoofinta qamriga xilligii loogu talagalay. Marka la eego warbixinnada hawlgalka ee xarunta, illaa iyo bishii Jannaayo, mugga dhoofinta dhoofka ayaa kordhay 4.9% isla muddadan oo kale sanadkii la soo dhaafay. Tan iyo bilowgii xilliga beeraha ee hadda jira ee Russia, 16.28 milyan oo ton oo ah sarreen ah ayaa lagu iibiyey dibedda.
Wasaaradda Beeraha Ruushku waxay samaysay saadaasha dhoofinta miraha cusub.
Wasaaradda Beeraha Ruushku waxay dib u eegtay saadaasha dhoofinta miraha ee xilligan beeraha. Alexander Tkachev, oo ka hadlayey shirkii G20 ee magaalada Berlin, ayaa sheegay in Ruushku uu siin karo 35-37 milyan oo tan oo ah hadhuudhka suuqa caalamiga ah. Sida laga soo xigtey wasiirka, miisaanka riwaayadda Ruushka ayaa lagu go'aami doonaa sicirka adduunka ee dalagyada waaweyn, saamiga ratiista ee doolarka Maraykanka iyo kharashaadka saadka ee wadooyinka iyo tareenada.
Beerta Ruushka ayaa heli doonta kabitaan lacag ah oo ah 75 bilyan oo shilin
Wasiirka beeraha ee Ruushka, Alexander Tkachev, ayaa sheegay in inta lagu guda jiro kulanka Dowladda Ruushka, in kabadan 75 bilyan oo doolar loo qeybin doono beeraha, oo ay ka mid yihiin: - 58.8 bilyan oo la soo jeediyey in lagu soo celiyo qayb ka mid ah dulsaarka deynta maalgashiga dhismaha warshadaha roon; - Inay magdhowaan qayb ka mid ah kharashka tooska ah ee la soo saaro, abuurista iyo casriyeynta qalabka AIC - 11.5 bilyan oo raqiis ah.
Xayawaanka Ruushka ayaa heli doona baasaboor elektaroonik ah
Dhamaan xayawaanka, marka laga reebo duurjoogta, waxay heli karaan baasaboor elektaroonig ah dhowr sano. Khariidad-dejin loogu talagalay aqoonsiga afduubka ayaa lagu horumariyaa Ruushka. Mid ka mid ah siyaabaha ugu caansan waa in lagu dhejiyaa qalabka raadiyaha raadiyaha raadiyaha maqaarka. Chip Tani waa mid aad u yar, xajmiga bariiska bariiska oo lagu mudo maqaarka iyadoo la isticmaalayo sirinjiye.
Qaar ka mid ah antibiyootika laga helay shimbir Ruush ah
Guddiga Xakamaynta Tayada ayaa hubiyay tayada cuntooyinka digaaga ee Ruushka. Waxay ogaadeen in mid ka mid ah shaybaarada ay ku jiraan haraaga antibiyootikada. Khubarada ayaa loo doortay 21 xabbo oo hilib digaag ah oo loo yaqaan 'chicken chicken' ka soo iibiya kuwa soo saarayaasha ugu badan ee iibiya guryaha si ay u xaqiijiyaan u hoggaansanaanta shuruudaha tayada aasaasiga ah.
Natiijada cilmi-baarista, saynisyahanno ka socda Jaamacadda Moskov State University ayaa helay 16 nooc oo warshad cusub ah.
Sanadka 2016-ka, noocyada dhirta cusub ayaa laga helay cilmi-baarayaal ka socda Jaamacadda Moscow State University oo ka baxsan Ruushka - Turkey, Kazakhstan, Laos, Vietnam, Congo, Mongolia, Kyrgyzstan, Cape Verde iyo Madagascar. Guud ahaan, shantii sano ee la soo dhaafay, ilaa 60 nooc oo cusub ayaa la helay. Waxaa jira saddex siyaabood oo loo furi karo noocyada: marka ay sameynayaan cilmi baarista, ka dib markii dhirta la helay ay la barbardhigaan noocyada hore loo yaqaan ee buugaagta tixraaca.
Dawladda Ruushku waxay ansixisay sharciyo cusub oo loogu talagalay dadka wax soo iibiya caanaha
Xukuumadda Ruushka ayaa dhowaan ansixisay sharciyo cusub oo go'aamin doona habka loogu talagalay ballamaha federaalka ah ee kabitaanka dhaqaalaha ee horumarinta caanaha lo'da. Ku dhowaad 8 bilyan oo roon ayaa loo qoondeeyey miisaaniyadda si loogu hirgaliyo barnaamijkan 2017. Iyadoo la raacayo amar dawladeed, isbeddeladan soo socda ayaa la sameeyey iyadoo la tixraacayo xeerarka bixinta kabidda iyo qaybinta 1kg oo caano ah oo la iibiyay iyo (ama) lagu shaqeynayo guriga: - Xeerarka loo baahan yahay in la hirgeliyo si loo helo deeqda fasalka ugu sareeya iyo (ama) nooca ugu horreeya ee caanaha lo'da iyo caanaha lo'da ayaa lagu bedeley shuruudaha ugu muhiimsan: caanaha waa in ay u hoggaansamaan shuruucda farsamada ee Ururka Shaqaalaha; - Isku dheelitirnaan ballaaran ayaa loo adeegsan doonaa xarumaha Ruushka, halkaasoo wax soo saarka caanaha xilliga warbixinta ay ka badan tahay 5000 kiilo.
Ruushku wuxuu tixgelin doonaa arrinta xaddidaadda soo dejinta cayayaanka
Ruushka ayaa ka fekeraya qaadashada tallaabooyin qiyaas ah oo loogu talagalay soo dajinta alaabta ilaalinta dhirta (sunta cayayaanka) ee u dhaxaysa caadada jamacadda Midowga Yurub (EurAsEC). Kulan isbuucii hore ka dhacay xarunta falanqaynta ee Ruushka, waxaa la xusay in muddadii u dhaxaysey Jannaayo ilaa Oktoobar sannadkii hore, soo dajinta wax soo saarka sunta cayayaanka ayaa kordhay 21% marka la barbardhigo 2015 oo sii wato koritaanka.
Ruushku uma badna inuu awoodo inuu soo celiyo hadhuudhka rikoorka ee sannadka 2017
Madaxwaynaha Midawga Ruushka, Arkady Zlochevsky, ayaa sheegay in dalagga hadhuudhka ee 2017-ka ee Russia uu noqon doono mid sare, laakiin ma gaari doono heerka rikoodhka sanadkii hore. Mashruucan ayaa ah in xaaladda gobolka ee jiilaalka dhammaadka jiilaalka ay tahay arrin lagu go'aaminaayo iyo sannadka 2015-2016 ku dhawaad ​​100% iyaga oo badbaaday, halka caadiyan beeralayda lumiyo 10-15%, sidaa darteed midkastaa looma xisaabin karo isla natiijooyinkaas sanadkan.
Wasaaradda Beeraha ee Ruushka ayaa u oggolaanaysa isticmaalka caanaha ka soo goosta leukemic
Maamulka Beeraha Ruushku wuxuu qorsheynayaa in uu isticmaalo caanaha laga soo saaro sacabka leukemic ee soosaarka caanaha. Go'aanka lagu samaynayo isbeddel ku haboon xeerka farsamada "badbaadada cuntada" waxaa laga yaabaa in dhawaan la sameeyo. Sida laga soo xigtay Wasaaradda Beeraha ee Ruushka, arrintaan hadda waxaa lagu falanqeynayaa xubno kale oo ka tirsan Midowga Yurub.
Soosaarista doofaarka Ruushka oo kordhay 9.4%
Wasaaradda Beeraha Ruushka ayaa soo warisay in 2016, wax soo saarka doofaarka lagu gowraco miisaanka nool ee dhammaan qaybaha oo kordhay 9.4% marka la barbardhigo 2015. Waxay u muuqataa in ganacsadaha ganacsiga, oo ka duwan beeraleyda gaarka ah ee yaryar, ay maalgashadaan waxsoosaar ku salaysan ururada beeraha.
Dawladda Ruushka ayaa ugu baaqday gobollada xaalado aan fiicnayn oo beeraha ah
Dawladda Ruushku waxay aqoonsatay gobollada dawlad-beereedka ah ee beeraha. Dmitry Medvedev, guddoomiyaha dawladda, ayaa saxiixay liis ah gobollada ku habboon. Liiskaan waxaa ku jira 29 maadi oo ka mid ah Ruushka, kuwaas oo lagu tilmaamay inay yihiin "xaalad aan fiicneyn oo loogu talagalay beeraha".
Ruushka ayaa mamnuucay soo dejinta hilibka lo'da New Zealand
Rag hubaysan oo ka tirsan Ruushka ayaa shalay ku dhawaaqay in ay qorsheynayaan in ay mamnuucaan hilibka hilibka New Zealand iyo hilibka lo'da, laga bilaabo Isniinta isbuuca soo socda. Natiijooyinka tijaabooyinka shaybaarka ee la sameeyay sannadkii 2016 ayaa muujiyay in xad-gudubyo badan oo ka jira bucshiraha hilibka iyo hilibka hilibka laga soo helay New Zealand.
Ruushku wuxuu noqday mid ka mid ah dhalatada sonkorta ee ugu weyn dunida
Madaxa wasaaradda beeraha, Alexander Tkachev, ayaa sheegay in Ruushku uu liiska ugu sarreeya liiska ugu badan ee soo saaraha sonkorta sonkorta, ka hor dalalka sida Faransiiska, Mareykanka iyo Jarmalka. Sida laga soo xigtay wasiirka, sannadka 2016-ka goosashada dhirta sonkorta waxaa lagu qiyaasey in ka badan 50 milyan oo tan.
Toddobaadka ugu horreeya ee bisha Febraayo, dekedaha Krasnodar Territory waxay hoos u dhigtay sahayda dibedda
Muddadii u dhaxaysay Jannaayo 31 ilaa Febraayo 6, 2017, dekedaha Krasnodar Territory ee Ruushka (Novorossiysk, Yisk, Temryuk, Tuapse, Caucasus iyo Taman) ayaa la siiyay 14 weel oo hadhuudh ah iyo alaabada la soo saaro, oo ah qiyaasta in ka badan 280,000 tan oo ay ku jiraan in ka badan 202,000 oo ton oo ah sarreen ah, ayaa ka warramay waaxda territoriga ee Adeegga Federaalka ee Xakameeynta Xoolaha (Pharmaceutical and Phytosanitary Supervision) (Rosselkhoznadzor) ee Krasnodar Territory iyo Jamhuuriyadda Adygea 7-dii Febraayo.
Wasaaradda Beeraha Ruushku waxay adeegsan doontaa xeerar adag oo xadidan si loo yareeyo soo dajinta cayayaanka
Isagoo ka hadlayay kulan ay ku yeesheen qawaaniinta soo dejinta ee alaabooyinka ilaalinta warshadaha, Jambulat Khatuov, oo ah Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha ee Ruushka, ayaa sheegay in waaxdu ay soo saari doonto xeerar cusub oo loogu talagalay sunta cayayaanka oo loo dhoofiyo Ruushka iyo EurAsEC. Waxa kale oo uu sharaxay in xeerarka adag ee ka caawinaya xaddidaan socodka cayayaanka ee suuqyada Ruushka.
Ruushku wuxuu badalayaa xeeladaha warshadaha caanaha
Wasiirka beeraha Ruushka Alexander Tkachev, oo ka hadlayey Shirweynaha VIII ee Ururka Shaqaalaha Qaranka ee Caanaha, ayaa sheegay, inkasta oo ay jiraan dhibaatooyin, warshadaha caanaha ayaa muujiyay isbeddel wanaagsan oo sannadkii hore. Dalka oo dhan, waxsoosaarka caanuhu wuxuu ku sugnaa heerkii 2015 wuxuuna gaaray 30.8 milyan tan.
Dawladda Ruushku waxay sii wadaa inay soo bandhigto hadalo dheeri ah oo ku saabsan beeraha beeraha - waqtigan wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha ayaa carabka ku adkeeyay baahida loo qabo wax soo saarka beeraha. Kulanka dhowaanahan ee saynisyahannada iyo abuurka abuurka ah, wasiir ku-xigeenka ayaa sheegay in ay tahay in ay beeralayda siiyaan sahayda tayada sare ee Ruushka, waxaana lagama maarmaan in la badalo saamiga abuurka ee suuqa si ay ula tartanto xulashada ajnabiga.
Dawladda Ruushku waa inay samaysaa xal dhammeystiran oo lagu taageerayo waxsoosaarka iyo dhoofinta alaabada beeraha ee muddada fog, ayuu yidhi madaxwaynaha Ruushka Vladimir Putin. Sida laga soo xigtay isaga, waddanku waxa uu u baahan yahay xalal isku dhafan oo u oggolaanaya soo saarayaasha Ruushka in ay kordhiyaan wax soo saarka iyo dhoofinta alaabta beeraha, iyo sidoo kale inay siiyaan dhammaan dhismooyinka lagama maarmaanka ah iyo macluumaadka suurtagalka ah.
Wasaaradda beeraha ee Ruushka ayaan dib u bilaabi doonin wax ka qabashada iibsiga hadhuudhka
Sida Vladimir Volik, Agaasimaha Waaxda Arrimaha Beeraha ee Wasaaradda Wasaaradda, ayaa shalay sheegtay, in Wasaaradda Beeraha Ruushku aanay wax sabab ah u lahayn dib-u-soo-kabashada wax-soo-saarka xukuumadda ee soo-saarka gallayda ee sannadka 2016. Sida laga soo xigtay isaga, ma jiri doonto in la yareeyo qiimaha, iyo dhoofinta ayaa muujisay natiijooyin wanaagsan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Russia 2020